3 qof oo rayid ah oo lagu diley duleedka degmada Dhahar ee gobolka Haylaan – SBC
3 qof oo rayid ah oo lagu diley duleedka degmada Dhahar ee gobolka Haylaan
Wararka ka imaanaya degmada Dhahar ayaa sheegaya in deegaankaasi ay ka aloosan tahay xiisad aad u kacsan ka dib markii maanta lagu diuley duleedka magaalada Dhahar sadex qof oo rayid ah oo sida la sheegay ka soo jeeda deegaankaas.
Sadexda qof ee la dilay ayaa wararku sheegayaan inay wateen booyad biyood waxaana jira warar is khilaafsan oo ka soo baxaya dilkaasi dadka geystey, inkastoo loo badaniyo dil ku saleysan aano qabiil.
SBC oo xiriir la sameysay dad ku dhaqan degamda Dhahar ayaa waxaa loo xaqiijiyey in sadexda qof ee dhimatey lagu kala magacaabo Khaliif Cali Maxamed, Siciid Axmed Warsame & Ayaanle Siciid, waxaana dilkooda la sheegay inay geysteen maleeshiyo hubaysan oo wararka qaarkood sheegayaan inay wateen baabuur qori ku rakiban yahay, inkastoo aan si buuxda cadeyn loo muujin.
Dilkan wuxuu ku soo aadayaa iyadoo degmada Dhahar ay ku sugan yihiin gudi isagu jira Cuqaal & Salaadiin kuwaasi oo la sheegay inay halkaasi u tageen hawlo dhexdhexaadin ah oo laga dhexsamaynayo beelaha deeganaadaasi.
Ma jiro wax war ah ka soo baxay dhanka maamulka Puntland oo ku aadan dilkan, iyadoo al soo sheegayo in caawa xiisad colaadeed laga dareemayo deegaanadaasi, wixii warar ah ee ku aadan dilkan & xaalada arimahan ka dambeeya kala soco SBC Online.